Creative Writing » ​နေ၀န်းနီ ဓာတ်​​သေ ဆြာဖြစ်​သွားခြင်း -၁၀	6
ဖုန်းလိုင်း​ အမျိုးအစား​တွေများလာသလို ဟန်းဆက်​ဆိုတာ​တွေကလည်းတံဆိပ်​မျိုးစုံနဲ့ ဆို​တော့ တစ်​ခါတစ်​​လေလိုက်​မမှီတာ​တွေရှိရဲ့ ။ ဟာ​ဝေး အမျိုးအစားမှာတင်​ နံပါတ်​​တွေအများကြီး ။ HUSWEI 220,300,320,510,511,610,611,620,730,88 နဲ့စတဲ့ ဂဏန်း​လေးလုံး​တွေလည်းအများကြီး ။ ကျန်​တဲ့ တံဆိပ်​ကပ်​ထားတာ​တွေလည်းရှိရဲ့ ။ C Only လို့ ​ခေါ်တဲ့ CDMA သီးသန့်​ ။ C/G လို့​ခေါ်တဲ့ CDMA နဲ့ GSM ၂ကတ်​ သုံး ။G/W လို့​ခေါ်တဲ့ GSMနဲ့ WCDMA ၂ကတ်​သုံး ။ ​နောက်​ 2G ပဲရတဲ့ အမျိုးအစား​တွေ ။ ​ငွေမတတ်​နိုင်​တဲ့သူ​တွေအတွက်​ သီးသန့်​ ။ အဲ့မှာ တန်​​ကြေးကစကား​ပြောလာပြန်​​ရော ။ ဒီအမျိုးအစားပဲ ။ ဘယ်​သူဝယ်​တုန်းက ဘယ်​​လောက်​ပဲ​ပေးရတာ ဆိုတာမျိုး ။ 2G နဲ့ 3G ကွာ​နေတာမသိ ။ ဆိုင်​ကမသိချင်​​ယောင်​​ဆောင်​ပြီး​ရောင်းလိုက်​​တော့ ခံရပြန်​​ရော ။ ​နောက်​အမျိုးအစား တစ်​ခု ၀င်​လာပြန်​ပြီ ။ COOLPAD ဆိုလား ။ အဲ့မှာလဲ ဗားရှင်းအလိုက်​ အမျိုးအစား​တွေ အများကြီး ခဏ ကိုင်​သုံးမိရုံနဲ့ စက်​က ပူလာတာ ။ အားတာရှည်​မခံတာ​တွေနဲ့ ။ သူက​ဈေးချို​တော့လည်း သူ့ပဲ ​တောသူ​တောင်​သား​တွေက၀ယ်​သုံး ။ ခဏ ခဏ ပျက်​ ။ မပြင်​တတ်​ ပြင်​တတ်​ ကလိခံရ ။ ​ခြောက်​​လောက်​ကိုင်​ပြီး လွှင့်​ပစ်​လိုက်​ရတာမျိုး​တွေလည်းရှိ​တော့ ဗမာပြည်​ကို အမှိုက်​ပုံလို သ​ဘောထားပြီး လာပုံ​နေသလားပဲ မှတ်​ယူလိုက်​ရ​တော့မလို ။ ထား​တော့ …….
​နေ၀န်းနီတို့ ဆီမှာက ခပ်​ညံ့ညံ့ ဟမ်းဆက်​​တွေပဲသုံးနိုင်​တာ ။ ဟမ်းဆက်​ကိုင်​လာတဲ့သူတိုင်း လက်​ထဲလိုက်​ကြည့်​ တစ်​ရာမှာ ကိုးဆယ်​​လောက်​က တစ်​သိန်း​အောက်​ ဟန်းဆက်​​တွေချည့်​ပဲ ။ ဟမ်းစက်​​တော်​​တော်​များများက Internal Storage နဲနဲ​လေး မီဂါဗိုက်​ ၂၀၀ မပြည့်​ချင်​ဘူး ။ Sd ကတ်​ကလည်း အမြင့်​ဆုံးထည့်​သုံးမှ 2G /4G ဒီထက်​မပိုဘူး ။ ဟန်းဆက်​တစ်​လုံးဝယ်​ရင်​ ဘာကြည့်​ဝယ်​သလဲ​မေးရင်​ အများစု ​ဖြေကြမှာက ” ​ဈေးချိုတာ ” လို့ ​ဖြေကြမှာ ။ သူများသုံးလို့သာ လိုက်​သုံးကြတာ အပို ၀င်​​ငွေက ရှိမှမရှိ ။ ပြီး​တော့ အကုန်​သာရှိပြီး ၀င်​​ငွေရ​အောင်​ ပြန်​ပြီး အသုံးပြုလို့ မရနိုင်​​သေး​တော့ ………. ။ အရင်းအနှီး တစ်​ခု အ​နေနဲ့ သ​ဘောထားပြီး ဘရင်းန်​ မြင့်​တာဝယ်​မကိုင်​ကြတာလည်းပါတယ်​ ။ (​ငွေ​ကြေးတတ်​နိုင်​တဲ့ စီးပွား​ရေး လုပ်​​နေတဲ့ သူ​တွေ​တောင်​ ခုထိ ကီးပက်​​လေး​တွေ သုံး​နေတုန်း သူတို့က ဆက်​သွယ်​စကား ​ပြောလို့ရရင်​ပြီး​ရော​လေ အပို ကုန်​ကျစရိတ်​ မခံဘူး ) ” ခင်​ဗျားတို့ ရွာက လူ​တွေက ​ချောင်းထဲဆင်းပြီး အင်​တာနက်​ ဘာ​တွေသုံးကြသလဲဗျ ” ​နေ၀န်းနီက မသိချင်​​ယောင်​​ဆောင်​ပြီး​မေးလိုက်​​တော့ ​စော​စောက ရွာသားက ” မသိပါဘူးဗျာ ဗိုက်​ဘာ ဆိုလား သစ်​ထူးလွင်​ဆိုလား ​ပြော​တော့​ပြော​နေကြတာပဲ ”
( အဲ့ဝက်​ အ​ကြောင်းက ​နောက်​မှ ပို့စ်​သပ်​သပ်​​ရေးပါ့မယ်​ ။ ဤကား စဂါးခြပ်) သူ​ပြောတဲ့ ဗိုက်​ဗာ တို့ သစ်​ထူးလွင်​တို့ ဆိုတာ တစ်​ကယ်​ဗျ ။ ခုမှ အင်​တာနက်​သုံးတဲ့ သူ​တွေ အလွယ်​တစ်​ကူ သုံးနိုင်​​အောင်​ ၀က်​ဆိုဒ်​ တစ်​ခုချင်းစီ အပ္ပလီ​ကေးရှင်း လုပ်​​ပေးထားတာ ။ အဲ့ဒိ အပ္ပလီ​ကေးရှင်း​တွေမှာ သတင်းဝက်​ဆိုဒ်​​တွေ ​တော်​​တော်​များများ ရှိတယ်​ ။ အံမယ်​ ​ဗေဒင်​​တောင်​ ကြည့်​လို့ရဆိုပဲ ။ ဟိုဟာ ဒီဟာ ကို​ကြောင်​ကြီး တို့ အကြိုက်​ အပ္ပလီ ​တွေလည်းရှိတယ်​ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ဒီရွာထဲက ပြင်​ညာရှင်​​တွေ ဂွဇက်​တက်​ အပ္ပလီ​ကေးရှင်း​တော့ လုပ်​မ​ပေးကြ​သေး သို့​ပေမဲ့ တစ်​ခုဆိုးတာက အဲ့ဒိ အပ္ပလီ​ကေးရှင်း​တွေက အင်​တာနက်​ ဖွင့်​လိုက်​တာနဲ့ ​အော်​တို ​ဒေါင်းလုပ်​​တွေ ဆွဲပြီး အင်​တာနက်​​ဒေတာ​တွေ တက်​တာပါပဲ ။ အရင်​က mpt မိနစ်​နဲ့ ​ကောက်​တုန်းက မသိသာ​ပေမဲ့ ​ဒေတာနဲ့ ​ကောက်​တဲ့ ​အော်​ရီ တို့ တယ်​လီ တို့နဲ့ဆို တွက်​​ခြေမကိုက်​ပါဘူး ။ တစ်​ချို့က အဲ့ဒိ​အော်​တို ​ဒေါင်းလုပ်​ အပ္ပလီ ​တွေထည့်​ထားပြီး ဟိုကတ်​က ​ငွေဖြတ်​တာကြမ်းတယ်​ ။ ဒီကတ်​က ​ငွေ မတရား ဖြတ်​တယ်​ ​ပြော​နေကြတာရှိ​သေး ။ တစ်​ကယ်​​တော့ Browser ​ကောင်း​ကောင်း တစ်​ခု ရှိရင်​ အဲ့ဒါ​တွေမလိုဘူး ဆိုတာ သူတို့မသိကြလို့ပါ ။ ဗိုက်​ဗာက​တော့ ဖုန်းနံပါတ်​နဲ့ ဆက်​သွယ်​ရတာ ။ ရွာသား​တွေက ကြိုက်​တယ်​​လေ ။ နိုင်​ငံခြား​ရောက်​​နေတဲ့ (များ​သောအားဖြင့်​မ​လေရှား​ပေါ့ စီဂါပူရ်​ လည်း အနည်းအကျဉ်း​တော့ပါရဲ့ ) သူငယ်​ချင်း​တွေ ​ဆွေမျိုး​တွေနဲ့ ညတိုင်း စကား​ပြောလို့ရတာကိုး ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ​လေးငါးနှစ်​က မြို့​ပေါ်အင်​တာနက်​ဆိုင်​ကိုလာ။ နိုင်​ငံခြားဖုန်း​ခေါ်ခိုင်း ။ တစ်​ခါ​ခေါ်ရင်​ ​ တစ်​​ထောင့်​ငါးရာ အနည်းဆုံး ဆို​တော့ ။ ခု မြို့​ပေါ်လည်း လာစရာ မလို​တော့ဘူး ။ ရွာနဲ့ မလှမ်းမကမ်း က ​ချောင်းထဲ သွားပြီး တစ်​ထောင်​ဘိုး​လောက်​ အကုန်​ခံနိုင်​ရင်​ ​မော​နေ​အောင်​​ပြောလို့ရဆိုပဲ ။ ​နေ၀န်းနီ လည်း ရုံးကို ရီပို့စ်​ လုပ်​တဲ့ သူ​တွေပြန်​မလာခင်​ စူပါတစ်​ထုပ်​နဲ့ ​တွေ့ကရာလူနဲ့ ​လေကန်​​နေမိတာပါ ။ သို့​ပေမဲ့ သူတို့က တီဗွီ ကြည့်​ဖို့ ​ရောက်​လာတာ ဆို​တော့ အ​ပေါ်ကိုပဲ​မော့​မော့ ကြည့်​​နေတာနဲ့ တီဗွီကြည့်​ဖို့ လွှတ်​လိုက်​ရတယ်​ ။ ဟုတ်​တယ်​​လေ ။ တစ်​ချို့ ကျွဲ​ကျောင်း နွား​ကျောင်းက​နေ ပြန်​လာကြတာ ဆို​တော့ အားနာစရာ ။ သူတို့ကလည်း ​နေ၀န်းနီကို တစ်​​ယောက်​ထဲ ထားခဲ့ရမှာ အားနာ ။ ​နောက်​ဆုံး ​နေ၀န်းနီ ပဲ အ​လျော့ ​ပေးလိုက်​ပြီး သူတို့နဲ့ တီဗွီ လိုက်​ကြည့်​ဖို့ ဆုံးဖြတ်​လိုက်​ပါ​တော့တယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ
2015 Mar 27 About naywoon ni
Alinsett@Maung Thura says: Gazette app လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြံဆနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
naywoon ni says: အလက်​ဇင်းဒါး ရယ်​ ဟန်းဆက်​ ​ကျော်​ညာတာက ကိုယ်​စားလှယ်​ယူထားသလားမှတ်​ရ ။ ဘယ်​သူပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ဟန်းဆက်​ကို အဆင့်​မြင့်​တာကိုင်​ချင်​သူချည့်​ပါပဲ ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကိုယ့်​ဝမ်းနာ ကိုယ်​သာသိ ဆိုသလို သူ့ထက်​အ​ရေးကြီးတာ​တွေ ဦးစား​ပေး​နေကြရ​တော့ ။ ​နောက်​ကျန်​ခဲ့တာပါကွယ်​ ။ ခု ရွာ​တွေမှာ ဟန်းဆက်​တဲ့ အ​ရေးကြီးတာက ဆ်ိုလာပြား နဲ့ ဆိုင်​ကယ်​ပါ ။ အဲ့မှာ နံပါတ်​တစ်​က ဆိုင်​ကယ်​ ။ ဆိုင်​ကယ်​ မရှိရင်​ ​ခြေ​ထောက်​ ရိုက်​ချိုးထားသလိုပါပဲတဲ့ ။ လူမှု​ရေး ကျန်းမာ​ရေး ပညာ​ရေး ဘာသာ​ရေး အားလုံး သွားသွားလာလာ လုပ်​ကိုင်​​နေရတဲ့ အချိန်​မှာ ဆိုင်​ကယ်​တစ်​စီးက မဖြစ်​မ​နေ လိုအပ်​ပါတယ်​ ။ ။ ဆိုင်​ကယ်​တစ်​စီးမှ မရှိရင်​ အ​တော်​မျက်​နှာငယ်​ရပါတယ်​ ။ ​နောက်​ ဆိုလာပြား သူမရှိရင်​လည်း ညည အ​မှောင်​ထဲမှာ​နေရတယ်​ ။ ဖ​ရောင်းတိုင်​ရှိ​ပေမဲ့ မီးအန္တရာယ်​ ​ကြောက်​ရပါတယ်​ ။ ကိုယ့်​အိမ်​မှာ ဆိုလာ​လေးမှ မတတ်​နိုင်​ရင်​ တီဗွီ ကြည့်​ချင်​ရင်​ သူများဆီ မျက်​နှာချို​သွေးရပါတယ်​ ။ အဲ့ဒိ​တော့ ဖုန်းက တတိယ ​နေရာ​လောက်​​ရောက်​သွားပြီ ။ တစ်​​ယောက်​နဲ့ တစ်​​ယောက်​ ဆက်​သွယ်​လို့ ရရုံ​လောက်​ပဲ သုံးကြ​တော့ တယ်​ ။ ​စော​စောက ဆိုင်​ကယ်​နဲ့ ဆိုလာက မိသားစုသုံး ဟန်းဆက်​က တစ်​ကိုယ်​​ရေ သုံးဆို​တော့ကာ
kai says: ဂိုဂယ်က.. တကမ္ဘာလုံးအင်တာနက်အလကားသုံးရရေး..Project Loon ဆိုတဲ့ ပရော့ဂျက်အကြီးကြီးလုပ်နေတာ.. နောင်.. ၅နှစ်လောက်ဆိုပြီးမယ်ထင်တာပဲ..
naywoon ni says: ကျ​နော်​တို့ဆိီက ရွာ​တွေအင်​တာနက်​မရတာမဟုတ်​ ။ တယ်​လီဖုန်းတိုင်​​တွေကျဲပါး​နေလို့ ။ ပြီး​တော့ မသုံးတတ်​​သေးလို့ ။ ကျ​နော်​တို့သုံး​စေ့ချင်​တာက တစ်​ခြား သူတို့သုံးချင်​တာက တစ်​ခြား ။ မြို့နဲ့ ငါးမိုင်​ပတ်​လည်​​လောက်​ ကျ​နော်​​ရောက်​ဖူးတဲ့ ရွာ​တွေ အချိန်​မ​ရွေး ​နေရာမ​ရွေး သုံးလို့ရ​နေသား ။ သို့​ပေမဲ့ သူတို့က သတင်းအပ္ပလီနဲ့ viber ​လောက်​ပဲ စိတ်​၀င်​စားတာ ။ ဒီထက်​နဲနဲ ပိုရင်​ fb ​လောက်​နဲ့တင်​ရပ်​​နေတာ ။
kai says: ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများ.. အင်တာနက်ဆိုတာကြီးစပေါ်လာတော့.. အများဆုံးကြည့်ကြတာ.. XXXX တွေ..
ခင်ဇော် says: ပွင့်လင်းမြင်သာသွားရင် ပထမဆုံး လက်တည့်စမ်းကြမဲ့ ကိစ္စက ………..
အင်းးးး………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.